Sourceforge တွင်အလျင်အမြန်ကြီးထွားနေသောစီမံကိန်း ၂၄ ခု Linux မှ
Sourceforge တွင်အလျင်အမြန်ကြီးထွားနေသောစီမံကိန်း ၂၄ ခု
နေ့တိုင်းငါမစစ်ဆေးပဲ RSS ကို၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဖတ်လေ့ရှိသောဆိုဒ်များ / ဘလော့ဂ်များ၊ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဂူးဂဲလ်တွင်မည်သည့်ရှာဖွေမှုမျိုးကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်ရရှိသောရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်😀
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် (ပုံမှန်အတိုင်း) ကျွန်ုပ်နှင့်မျှဝေသည်
ဟုတ်ကဲ့ ... «ထုံးစံအတိုင်း« ENG မှ ESP သို့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်ပထမဆုံးဘာသာပြန်ဆိုသည့်နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာစကားသည်ကန့်သတ်ချက်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာယုံကြည်သောကြောင့်လူတိုင်းသည်ဘာသာစကားများစွာကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ; များစွာသောသူတို့သည်စပိန်စကားကိုသာပြော / ဖတ်တတ်ကြသည်၊ ထိုပရိသတ်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဆောင်းပါးများကိုဘာသာပြန်နာရီနှင့်နာရီများအသုံးပြုသည်
ဟုတ်ပါတယ်။ ငါ LOL တောင်မှအဝေးရောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်တစ် ဦး မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာပြန် / ဘာသာပြန်မှုအမှားများအမြဲရှိလိမ့်မည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်တတ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအားလုံးဖြင့်ပါဝင်ပံ့ပိုးရန်ကြိုးစားနေသောလူတစ်ယောက်သာဖြစ်သည်။ 😀
«Sourceforge တွင်အလျင်အမြန်ကြီးထွားနေသောစီမံကိန်း ၂၄ ခု«
မှ နေပြည်တော် ငါတို့သည် ဒီနှစ်နို ၀ င်ဘာလကတိုးတက်မှုနှုန်း = ဒေါင်းလုပ်အရေအတွက်
ဤအတိုင်းအတာသည်အမှန်ကန်ဆုံး (အီးမေးလ်စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သူအရေအတွက်၊ ပွင့်လင်းပြီးပိတ်ထားသောလက်မှတ်အရေအတွက်စသည်ဖြင့်အခြားသူများလည်းရှိသည်) ဖြစ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းစာရင်းအင်းများကိုရေးဆွဲရန်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ စာရင်း။
MinGW compiler ၏ version အသစ်နှင့် code ကို update လုပ်ထားသော Dev-C ++ ကိုပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှုပြုလုပ်သည်။
2. အဆိုပါ OpenGL တိုးချဲ့ Wrangler စာကြည့်တိုက်
OpenGL Extension Wrangler Library သည်ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် C / C ++ တွင် extensions များကိုအစပျိုးရန်နှင့်အိတ်ဆောင် applications များရေးသားရန်ကူညီသည်။ လက်ရှိတွင် GLEW သည် Windows, Linux, Darwin, Irix နှင့် Solaris အပါအဝင် operating system များစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
PhotoFilmStrip သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများမှရုပ်ရှင်များကိုအဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့်ဖန်တီးသည်။ ဦး စွာဓါတ်ပုံများကိုရွေးချယ်ရန်၊ လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းကိုပြုပြင်ရန်၊ ပြီးနောက်ဗွီဒီယိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ Full-HD အထိတောင် VCD, SVCD, DVD များအတွက် output ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည် animated slideshows များကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။
4. eSpeak: မိန့်ခွန်းပေါင်းစပ်
၎င်းသည်စာသားကို«အသံ / အသံ»အဖြစ်ပြောင်းရန်၊ အင်္ဂလိပ်နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုပံ့ပိုးရန်အတွက်အင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေမယ့်အတုအသံထွက်နှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား။ command line အစီအစဉ်အနေဖြင့်ရွေးချယ်စရာများစွာ၊ မျှဝေထားသော Linux library နှင့် Windows version SAPI5 ဖြင့်ရနိုင်သည်။
5. ကြော်ငြာများအတွက် OSClass
သင်၏ကြော်ငြာသို့မဟုတ်ဆိုက်များကိုဖန်တီးရန်၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသော script ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ - Plugins၊ Themes၊ ဘာသာစကားမျိုးစုံ၊ Captcha၊ Dashboard၊ SEO ဖော်ရွေမှု။
6. Chakra စီမံကိန်း
Chakra GNU / Linux သည်အခမဲ့၊ ဖော်ရွေသောဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်သော LiveCD ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် GTK application များကိုအသုံးပြုရန်ပုံသေတပ်ဆင်ထားသည့် package များစနစ်ဖြင့် KDE SC နှင့် Plasma Desktop လည်းရှိသည်။
7. XAMPP အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
10 ။ nsnam
11 ။ net-snmp ဖြစ်သည်
12 ။ Waterfox
13 ။ simutrans
14 ။ cesium - ပုံဆွဲစက်
15 ။ HyperSQL ဒေတာဘေ့စ်အင်ဂျင် (HSQLDB)
16 ။ ListenArabic.com MP3 Download လုပ်ပါ
17 ။ JasperReports အတွက် iReport-Designer
18 ။ Sync Mod ကိုဆက်သွယ်ပါ
19 ။ Minecraft X-Ray
20 ။ Weka - ဂျာဗားရှိစက်သင်ယူခြင်းဆော့ဝဲလ်
21 ။ အဆင့်မြင့်ကြက်သွန်နီလမ်းကြောင်း
22 ။ Process Hacker များ
23 ။ မှော်ခွဲ
24 ။ Moodle
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Sourceforge တွင်အလျင်အမြန်ကြီးထွားနေသောစီမံကိန်း ၂၄ ခု
အားလုံးအနက်ငါလက်ရှိငါနှင့်အတူရှိနေသော distro, Chakra သာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်စီမံကိန်းတွေအများကြီးရှေ့ဆက်ရွေ့လျားကြည့်ဖို့အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်။
6 ရာအရပျ၌ဂရိတ် Chakra ။
ငါ Arch ဟာပိုများတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာတူညီတဲ့ဟက်တာပဲ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Waterfox ဟာ Linux အတွက်ဗားရှင်းမထုတ်ပေးခဲ့ဘူးလား။
ငါထင်တယ် nope ... အနည်းဆုံး Sourceforge ဖိုင်များထဲမှာ: http://sourceforge.net/projects/waterfoxproj/files/
အခြားဘာမျှမ xDDDDDDDDDDDDDDD အရေးပါပြီးနောက် esque
ဒါဟာထွက်လာတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်ဒါဟာ Chakra ဖြစ်လိမ့်မည်
Orange Crush: လှပသော Gtk ဆောင်ပုဒ်နှင့် Gnome-Shell အတွက်လိမ္မော်ရောင်သံများ
F1 Spirit Remake: ပျော်စရာပြိုင်ပွဲဂိမ်း